Ungashada kanjani umlimi?
Umqondo wendlela yokushada umama, ngokuqinisekile, mhlawumbe kwakungeyona nje owesifazane oyedwa ekhanda lakhe. Futhi kuthiwani uma ubuhle obukhazimulayo obembethe ubuso namadayimane bubuka kithi kusukela esikrinini se-TV sonke isikhathi, futhi emgwaqweni, cishe nsuku zonke, amantombazane amancane adlula kithi ngokungapheli ezimotweni ezihlakaniphile. Yiqiniso, iningi labo liye lazuza konke, kodwa hhayi konke. Abanye bashadile ngempumelelo kakhulu.
Yini okudingayo ukushada kumuntu wezigidi?
Okokuqala, kufanele ube umuntu othakazelisayo futhi ongajwayelekile. Amadoda angashadile acebile, njengombuso, asevele ejwayele ukuthi cishe owesifazane wesithathu ongashadile uzama ukuwina, ngoba kuhle ukuhlala lokho okufunwa yilowo nalowo. Ngakho-ke, ungalindeli ukuthi uzokwazi ukuthola i-millionaire kubayeni kuphela ngosizo lwemilenze emihle nokubukeka kwe-languid. Lapha udinga ukwenza okuningi ngokubanzi. Indoda kumele ibone ngaphakathi ku-vaucity, kufanele umthande.
Thola ukuthi yini amadoda ayithandayo kulo mbuthano. Lokhu kungaba igalofu, ukugibela amahhashi, ukugada, izombusazwe, izimoto zokuqoqa nezinto eziningi-eziningi. Funda ngakho konke okuncane okungenani, ukuze kuthi lapho ufika naye unento okumele ukhulume ngayo.
Funda imithetho yokuziphatha . Ukuze uhlangabezane nendoda amaphupho akhe "awawa ngobuso bokungcola," funda imithetho yokuziphatha, ngoba kufanele ube yindodakazi yangempela. Funda indlela yokugcina kahle izinto zetafula, uhambe kahle, gcina ukuma kwakho. Naka inkulumo yakho. Akunakwenzeka ukuthi "Che", "dam" engapheli kanye namanye amagama-amaphilisi azohlobisa inkulumo yakho futhi afane nendoda. Ngokwesibonelo, angakubheka "umlimi ohlangene", ngakho ungazami ukuphela bese ukhuluma kahle.
Qaphela ukubukeka kwakho . Akungabazeki ukuthi owesifazane ohlekayo futhi ohlotshiswe kahle uyamjabulisa kakhulu umuntu othakazelisayo. Ngakho-ke, unakekele ukugcoba kwakho, ubeke izinwele ukuze wenze inombolo. Buyekeza ikhabethe lakho. Thenga okungenani izinto ezimbalwa kakhulu nezindleko. Kungakhathaliseki ukuthi kuzwakala kanjani kubi, kodwa abacebile bajwayele ukuthola kule mpilo yekhwalithi elihle kakhulu, okufanayo nakwabesifazane.
Uma ukhuluma, lalela lo muntu ngokucophelela, ubonise isithakazelo kulokho akushoyo futhi akukho nhlobo ongenalo isithakazelo kwimali engenayo. Ezinyangeni zokuqala zokuthandana kungcono ukuzama ukugwema isihloko nganoma iyiphi indlela. Uma uthinta isihloko sezimali emhlanganweni wokuqala, khona-ke lo muntu angase abe nokukhathazeka kuwe. Uzokuqaphela nje ukuthi ungumzingeli olandelayo esikhwameni sakhe. Ngakho-ke, okokuqala isihloko semali siyinto engafanele, ngaphandle kwalokho yonke imizamo yakho ingahamba kahle.
Futhi umthetho owodwa obaluleke kakhulu: uma usebenzisana nomuntu-mhlaba, ziphathe kahle, njengoba kufanele ube ngumfazi wangempela. Ungabeki nje kuwo, vula ngokukhululekile futhi uziphathe njengokungathi ubheka injabulo enkulu yokuzijwayela nomuntu we-soooo. Yiba nomqondo wokuziqhenya. Noma yimuphi umuntu, ngisho nendoda ecebile kakhulu, uyakwazisa okungaphezu kwalokho ayenakho ngobunzima.
Lapho ungathola khona umholo
Amathiphu okunikeza kalula, uzothi. Futhi yilapho lapho ungathola khona umlandi ofunwa kakhulu? Ayikho impendulo ecacile. Kodwa nakanjani ungasho into eyodwa - ukuhlangana nomnumzane ku-cafe eseduze noma endaweni yokuphola cishe akunakwenzeka. Cha, khona-ke kungenzeka ukuthi wazi kangcono umuntu ozimele ngokuphelele ongakwazi ukukuhlinzekela yena nawe, kodwa ngeke uthole ama-millionaire lapho.
Okufanayo kuya kumaqembu ahlukahlukene namaqembu ezokuzijabulisa. Abaningi abahlala khona, mhlawumbe, ngezinye izikhathi bahlangana, kodwa bahamba nje ngendlela evamile, ukuze bajabule. Uma wena futhi wazi kangcono eqenjini elinomuntu onjalo, cishe cishe, ufuna nje ukujabulisa nawe ngaphandle kwezibopho zesikhathi esizayo.
Kungcono ukhokhele imibukiso ehlukahlukene, iminikelo yothando, ukwamukela. Ungakwazi ukuboleka imali bese uhamba ngeviki eya eBahamas ngethemba lokuhlangana nesikhulu lapho, kodwa lokhu kuyisinyathelo esiyingozi kakhulu. Yiba njalo ezindaweni lapho abantu abacebile bechitha isikhathi sabo. Ungazama ukwenza imidlalo abayithandayo, khona-ke uzothola ithuba lokuhlangana nomyeni wakho wesikhathi esizayo, isibonelo, ngqo ekolini. Lungisa yonke into ukuze umhlangano ubheke "okungahleliwe" futhi lo muntu wayengazi ukuthi empeleni ulokhu umzingela.
Futhi ekugcineni kungakufanele ukusho ukuthi abantu abacebile banenkinga yabo siqu. Cabanga ukuthi ulungele yini ukuhlala nokubekezelela lokho ongakuthandi, ngoba akubona wonke umuntu onesizotha futhi olungele ukuthulula amadayimane ezinyaweni zakho.
Mhlawumbe udinga nje ukuthola umuntu omthandayo, ungathandi, hhayi esikhwameni sakhe esinamafutha, kodwa ngekhwalithi yangaphakathi, ebaluleke kakhulu? Mhlawumbe kufanele uhlolisise uSasha ojwayelekile, oye wakhala ngokubuyisa ngasese ngaphansi kwamafasitela akho futhi ekulungele ukukunikela impilo yakho? Ubani owaziyo, kodwa kuthiwani uma eminyakeni embalwa kamuva eba indoda ecebile kakhulu?
Bheka nxazonke, mhlawumbe kungcono ukuthola umuntu othanda ngempela futhi kumsize ukuthi acebe kunokuba aphishekele injabulo enonya ngesimo esikhwameni esikhulu somuntu ongathandwa ngumuntu. Abavumelani na? Kulungile-ke, qhubeka phambili, ufuna umholo!
Ungasusa kanjani uthando lomuntu, uma engakuthandi?
Uthando luzohlala luqala ngesifiso
Uma lo mfana ethi ake sibe abangane
Imithetho engu-7 yomshado ngaphandle komshado
I-Spaghetti ne-sea cocktail
Amazambane abhakawa ngama-chanterelles
Amadoda - izindinganiso zanamuhla zobuhle
Shampoo for izinwele ukukhula
Ilanga nolwandle: umbusi we-make-up Chantecaille Summer 2017
Ukuzivocavoca ukulungiselela ukubeletha
I-Horoscope yowesifazane wase-Aries ngoJulayi 2017
Indlela yokugcina injabulo nokugwema ukucindezeleka
Kuhlobo oluhle hamba kancane
Imithetho Yezwi Elihle Ekukhulumisaneni
Isifo sikashukela: izimpawu kanye nokwelapha